Accueil > Gazetin'ny nosy > Governora : Be dia be no hosoloina
Governora : Be dia be no hosoloina
Mandeha dia mandeha ny resaka ankehitriny fa hisy indray ny fanoloana ireo governora maromaro any amin’ny faritra. Efa nisy ny fivoriana nataon’ireo birao politika izay ahitana ny sekretera jeneralin’ny faritra sy ny “coordo” Tgv(tanora Malagasy vonona) sy ny Mapar(miaraka amini Preziga Rajoelina) izay natao tamin’ny herinandro roa lasa teto Antananarivo izay. Mazava ho azy fa nandinika ny antotan-taratasy mahakasika ireo kandidà ho amin’izany toerana izany izy ireo. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia miandry ny fanampahankevitr’ingahy Andry Nirina Rajoelina sisa ny amin’ity raharaha ity.
Ankoatran’ireo ho esorina dia tsy maintsy miroso fanendrena izay ho governora any Vatovavy ny fanjakana. Tsy maintsy ho tendrena koa ny governora any Anosy izay lasa minisitry ny asa vaventy ankehitriny.
Eo ankatokin’ny taona 2022 izay hanomanana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2023 izao dia tsy maintsy miroso amin’ny fanesorana ireo mpitondra hita fa tsy nahavita ny asa nampisahanina azy ny fanjakana. Maro no voakina mafy ny governora any amin’ny faritra ankehitriny. Manaratsy ny tarehin’ingahy Rajoelina eo anatrehan’ny vahoaka izay nifidy azy izany.